Wararka - Laga bilaabo Sebtember 1, Shiinaha waxay qaadi doontaa mas'uuliyad wada jir ah iyo dhowr ah qaadashada walxaha caagga ah ee dib loo warshadeeyay ee laga keeno Shiinaha
Laga bilaabo Sebtember 1, Shiinuhu wuxuu qaadi doonaa mas'uuliyad wada jir ah iyo dhowr ah qaadashada walxaha caagga ah ee dib loo rogay ee laga keeno Shiinaha
Labadii sano ee la soo dhaafay, siyaasadaha kala soocida qashinka guryaha ayaa la hirgaliyay, iyo dib u warshadeynta qashinka iyo dib u warshadeynta dhamaadka-dhamaadka ayaa la xoojiyay.
Berri waa maalinta rasmiga ah ee la kala wareejinta ee "qashin qubka adag" cusub iyo kii hore. Laga bilaabo berri, qaabka dib-u-soo-dejinta balaastigga dib loo cusbooneysiin doono. Mustaqbalka, dheef shiidka walxaha qashinka ee Shiinaha ayaa noqon doona isbedelka guud!
Waqtigan xaadirka ah, hakinta soo dejinta walxaha caagga ah ee dib loo warshadeeyay ee shirkadaha maraakiibta qaar ayaa dhalisay dood ballaaran oo ku saabsan warshadaha. Qodobka ugu muhiimsan ayaa ah inay qaadi doonaan masuuliyad wada jir ah iyo dhowr masuul oo ah helitaanka walxaha caaga ah ee dib loo warshadeeyay ee laga keeno Shiinaha.
Shirkadaha leh ganacsiga khuseeya waxay badali doonaan shirkadaha maraakiibta. Si kastaba ha noqotee, dabeecadaha shirkadaha waaweyn ee maraakiibta ma saameyn doonaan shirkadaha maraakiibta si ay ugu daydaan? Wali lama oga.
Maraakiibta COSCO ee Waqooyiga Ameerika waxay ku dhawaaqday inay joojinayso helitaanka qashinka adag ee loo daabulayo dhulweynaha Shiinaha laga bilaabo Sebtember 1. Waxaa la fahamsan yahay in shuruudaha ay khuseeyaan dhammaan badeecadaha qashinka adag, oo ay ku jiraan waraaqaha qashinka, biraha qashinka, caagagga qashinka, dharka dharka, kiimikada qashinka. , iwm
Tan iyo markii la mamnuucay qashinka, hagaajinta siyaasadda soo dejinta iyo heerarka midaysan ee walxaha caagga ah ee dib loo warshadeeyay ayaa soo jiitay dareenka warshadaha.
Sharaxaada kale ee qashinka ayaa la jaan qaadaya aqoonsiga xuduuda, laakiin walxo ayaa sidoo kale la mamnuucay, taas oo kicinaysa su'aasha ah in la mamnuuco soo dejinta walxaha caaga ah ee dib loo rogay
Maaddaama "sharciga qashinka adag" ee cusub uu si cad u sheegayo in gobolka uu si tartiib tartiib ah u ogaan doono eber soo dejinta qashinka adag, wuxuu kordhiyaa ciqaabta qashinka adag ee sharci darrada ah, wuxuuna si cad u sheegayaa in xamuulka iyo soo dejiyaha ay wada qaadan doonaan mas'uuliyad dhowr ah iyo dhowr fal waa la ganaaxi karaa in ka badan 500000 yuan iyo wax kayar 5000000 yuan), sharciga cusub ee qashinka adag ayaa dhaqan galaya Sebtember 1, 2020.
Arintaan ay saameysay, shirkadaha maraakiibta ayaa ka walwalsan ama wada jir iyo dhowr masuul ayey ka noqon doonaan Waqtigaan la joogo, kaliya Shirkada Maraakiibta ee COSCO ayaa maqashay bayaanka ay soo saartay COSCO Shipping. Waqtigaan la joogo, Sinotrans, Yangming, evergreen, one, CMA iyo shirkadaha kale ee waaweyn ee xamuulka qaada waxay soo dajiyaan walxaha balaastigga ah ee dib loo rogay, laakiin shirkadaha noocan oo kale ah ma aysan soo saarin hadalo khuseeya.
Waa in la ogaadaa in badeecad dhammeystiran, walxaha dib loo soo cusbooneysiiyay aysan ahayn qashin adag.
Isbedelka mustaqbalku wuxuu noqon doonaa iyadoo la hirgaliyo "sharciga qashinka adag" ee cusub, qaybo yar yar oo la soo dhoofiyo ayaa si tartiib tartiib ah looga saari doonaa dalka, iyo qaybo tayo sare leh oo la soo dhoofiyay ayaa noqon doona isha ugu weyn.
Laakiin hadda, iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah inuusan jirin halbeeg qaran oo mideeya soo dejinta walxaha balaastigga ah ee dib loo warshadeeyay, maamulaha leh ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta ee dibedda ayaa weli u baahan inuu taxaddar sameeyo.
Waxyaabaha soo socdaa waa arrimaha u baahan fiiro gaar ah ee Shirkadaha soo dejinta granule:
1. Waa lagama maarmaan in la yeesho dareen khatar ah oo faham buuxa laga helo badeecada, gaar ahaan kuwa halista badan ee soo dejinta, sida guryaha, tilmaamaha, midabada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee walxaha dib loo warshadeeyay;
2. Haddii shaki ku jiro nooca alaabta, kastamadu waa inay marka hore la tashadaan hay'adda kormeerka ee ay khusayso;
3. Markay caadaduhu kor u qaadaan su'aal oo ay shaybaarka u diraan hay'adda aqoonsiga si loo aqoonsado, waxaa lagama maarmaan ah in muhiimad weyn la saaro wada shaqeynta shaybaarka si loo gaaro muunad qaadasho la isku halleyn karo oo macquul ah;
4. Haddii ay dhacdo khilaaf sharci, ciqaab maamul ama dhimista qiimeynta amaahda, waxaa lagu taliyay in marka hore lala tashado qareen lana macaamilo iyada oo loo eegayo xaaladda gaarka ah. Haddii loo baahdo, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo xuquuqdeeda iyo danaheeda sharci ahaaneed iyada oo loo marayo dib-u-fiirin maamul iyo dacwad maamul.